Cooking for Geeks - Calm Hill
စိတ်ကူးပေါက်တဲ့အခါ O’Reilly ကိုသွားသွားကြည့်ပြီး စျေးချတဲ့ စာအုပ်တွေကို တခါတရံ သွားကြည့်တယ် စိတ်ဝင်စားစရာ အဖြစ်နဲ့ Software Development စာအုပ်တွေကြားမှာ Cooking for Geeks ဆိုတာမြင်တော့ အတော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ကောင်းမှန်း မကောင်းမှန်းမသိတော့ Amazon ကိုသွားပြီးတော့ Review တွေကိုသွားဖတ် စာအုပ်ရဲ့ Official Website မှာလည်းသွားဖတ်တော့ အညွန်းအတော်ကောင်းတယ် အဲဒါနဲ့နမူနာပြထားတဲ့ စာလေးတွေဖတ်လိုက်တာ အတော်သဘောကျသွားတာနဲ့ ဝယ်လိုက်တော့တယ်။
Cook Book ကို Software Development အသုံးအနှုံးတွေနဲ့ ရေးထားတာ အတော်လေးကို သဘောကျတယ် အရသာအတွက်အတွက်အချက်ကို သင်္ချာလိုရေးထားတာလည်း အလွန်သဘောကျတယ်။ တကယ်တမ်းဖတ်မယ်ဆိုရင် ချက်တာပြုတ်တာရဲ့ နောက်ကွယ်က Chemical အပြောင်းအလဲတွေ အပူချိန်အပြောင်းအလဲရယ် အကျက်လွန်လို့ အဟာရဆုံးရှုံးမှု့စတာတွေကို အသေအချာရေးပြထားတော့ မသိသေးတာတွေ အတော်လေးကိုသိရတယ် တခါတရံမှာ ကိုယ်ကပျင်းပြီးတော့ အကြာကြီးချက်မိတာတွေကို သတိထားမိလာတယ် ပုံမှန်အားဖြင့် Cook Book တွေမှာ ဟင်းချက်နည်းပဲပါတယ် နောက်ကွယ်က Scientific Changes ကိုရေးပြနိုင်တာမရှိပါဘူး။
Cooking of Geeks ဆိုတဲ့အတိုင်း စာအုပ်စကတည်းက What Type of Cook Are You? ဆိုပြီးတော့ Multiple Choice ဖြေခိုင်းတော့တာပဲ ပထမဆုံးစချက်တဲ့ Recipe နာမည်က Eigen Pancakes: The Hello, World! of Recipes လို့ပေးထားတယ်။ အခန်းတိုင်းမှာ Cooking for Geeks ဆိုတဲ့အတိုင်း ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာ လွယ်ကူအောင် တွေးပြီးတော့ တခြားဘယ် Cook Book မှာမှမပါတဲ့ Tips မျိုးတွေပါလာတယ်။ Brownie ဖုတ်ဖို့အတွက် ခွက်မရှိတဲ့အခါမှာ လိမ္မော်သီးခွဲစားရင်း အခွံကိုလွှင့်မပြစ်ပဲနဲ့ လိမ္မော်ခွံထဲကိုထည့် ဖုတ်တာမျိုးပေါ့။
Introduction အခန်းအဖြစ် Hello Kitchen နောက်ပြီးတော့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေ သိကောင်းစရာအဖြစ်က Initializing the Kitchen အသားငါးအသီးအရွက်တွေ အကြောင်းအတွက်က Choosing Your Inputs ချက်ပြုတ်တဲ့အခါ သိသင့်တဲ့ အပူချိန်တွေအကြောင်းက Time and Temperature မုန့်ဖုတ်တဲ့အကြောင်းအတွက်က Air Baking’s Key Variable ဟင်းမှာခပ်တဲ့ အမွှေးအကြိုင်ဆားသကြား စသည်ဖြင့်အတွက်က Playing with Chemicals မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ အိုးခွက်တွေ မီးဖိုတွေ မုန့်ဖုတ်ဖိုတွေအကြောင်းက Fun with Hardware ဆိုပြီး အခန်းတွေခွဲပြီး ရေးပြထားတာ ဖတ်ရင်းနဲ့ စာရေးတဲ့လူရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို တကယ်ကိုချီးကျူးမိတယ်။
ဖတ်နေသလောက်မှာ ထူးထူးခြားခြားက Twitter Recipe ဆိုပြီးတော့ Maureen Evans (@cookbook) ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်က Character 140 ပဲဆန့်တဲ့ Twitter မှာ Recipe ရအောင်ရေးပြီးတော့ Tweet လုပ်တယ် စိတ်ဝင်စားလို့ Follow လုပ်ကြည့်တော့ အတော်ကိုချီးကျူးစရာကောင်းအောင် Character 140 နဲ့ Recipe ကိုလိုတိုရှင်းရေးထားတာ။ လက်ရှိကတော့ Cooking for Geeks ကိုဖတ်ရင်းနဲ့ စမ်းသပ်စရာတွေ အများကြီးရလာတယ် အလုပ်ပိတ်ရက်တွေမှာ စမ်းသပ်ပြီးတော့ ချက်ပြုတ်ကြည့်ရဦးမယ် အခုထိကတော့ ကုန်အောင်တောင် မဖတ်ရသေးပါဘူး ဖတ်နေရင်းနဲ့ သဘောကျလို့ Review ရေးထားတာ။